ပြောင်း ကနေဒါ ဒေါ်လာ (CAD) အွန်လိုင်း, ငွေကြေး ပွောငျး
ကနေဒါ ဒေါ်လာ (CAD)
ပွောငျး ကနေဒါ ဒေါ်လာ (CAD)
သငျသညျ ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ကနေဒါ ဒေါ်လာ (CAD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးအွန်လိုင်းရန်။ ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး, နှင့် 2500 cryptocurrencies. ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
CAD – ကနေဒါ ဒေါ်လာ
ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၏ငွေကြေးဖြစ်ပါသည်: ကနေဒါ. ကနေဒါ ဒေါ်လာ ထို့အပြင်ဟုခေါ်သည်: Loonie, ခေါ (အင်္ဂလိပ်), Huard, piastre (ပြင်သစ်).
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် ကနေဒါ ဒေါ်လာ လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ပြောင်း ကနေဒါ ဒေါ်လာ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေးရန်
ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.8ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ယူရိုEUR€0.665ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.576ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.733ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.66ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.94ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč17.19ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.03
ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.03ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$15.97ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$6.21ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.46ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹60ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.122.67ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.06ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.11ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿25.09ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.2ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥86.5ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩894.8ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦305.16ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽61ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴22.42
ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ BitcoinBTC0.00001 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ EthereumETH0.000398 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ LitecoinLTC0.00359 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ DigitalCashDASH0.00309 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ MoneroXMR0.00303 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ NxtNXT13.14 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ Ethereum ClassicETC0.0415 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ DogecoinDOGE13.31 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ZCashZEC0.00462 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ BitsharesBTS6.96 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ DigiByteDGB10.01 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ RippleXRP0.855 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ BitcoinDarkBTCD2647253.55 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ PeerCoinPPC0.82 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ CraigsCoinCRAIG34999896575.89 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ BitstakeXBS0.322 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ PayCoinXPY320.17 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ ProsperCoinPRC80043095.2 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ YbCoinYBC0.000445 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ DarkKushDANK24629556849.7 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ GiveCoinGIVE166249508735.5 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ KoboCoinKOBO61.65 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ DarkTokenDT0.737 ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD သို့ CETUS CoinCETI11083300582.37
399 MRP to MYR2021-04-22 10:33:00
480150 AMD to IRR2021-04-22 10:31:08
1 USD to HRK2021-04-22 10:30:09
100.5 NGN to KOBO2021-04-22 10:28:02
1 RUB to USD2021-04-22 10:26:34
1500 TWD to PLN2021-04-22 10:23:32
0.1 BTC to USD2021-04-22 10:22:22
0.05 BTC to USD2021-04-22 10:20:13
13689 PPP to DKK2021-04-22 10:18:05
0.005 BTC to USD2021-04-22 10:17:54
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 10:35:01 +0000.